Xavi Hernández Oo Ka Warbixiyay Xulka Uu U Arko In Uu Ku Guuleysan Doono Koobka Aduunka 2018 – Gool FM
(Spain) 27 Abriil 2018 Kubad sameeyaha reer Spain Xavi Hernández ayaa xaqiijiyay inuu wadankiisa ugu cad-cad yahay inuu ku guuleysto Koobka Adduunka ee 2018ka ee lagu qabanayo Russia bisha June soo aadan.
Xavi Hernández ayaa wuxuu hadalkiisan imaanayaa kadib markii uu wareysi uu siiyay website-ka rasmiga ah ee xiriirka kubada cagta dalka Spain isagoo amaanay diyaarinta xulka Spain si uu uga qeyb galo Koobka Adduunka uu hogaaminayo tababare Julen Lopetegui.
Kubad sameeyaha reer Spain ayaa wuxuu yiri: “Waxaa jira jiil aad u wanaagsan iyo xamaasad badan ee xulka qaranka Spain ah, waxaana qabaa in qof walba uu si fiican u shaqeynayo”.
“Julen Lopetegui wuxuu kooxdan siinayay qaab cusub ee leh maskax guuleed, ee xiiseeneysa inay raadiso guul oo kliya”
“Waxaa kaliya nagu final daawashada kulankii saaxiibtinimo ee xulalka Spain iyo Argantina, waxaan wada aragnay sida ay u ciyaareen isla markaana ay ugu raaxeysteen kulankan, waxaan u maleynayaa in Spain ay ka mid tahay kooxaha ugu cadcad ee ku guuleysan kara Koobka Aduunka”.
Mourinho oo qirtay inuu ka shalaaynayo dagaalkii uu la galay Arsene Wenger